घर कता फर्काएर बनाउने? के-के हुन् अशुभ? यस्ता छन् शास्त्रीका सुझाव »
Home/विचार/घर कता फर्काएर बनाउने? के-के हुन् अशुभ? यस्ता छन् शास्त्रीका सुझाव
घर कता फर्काएर बनाउने? के-के हुन् अशुभ? यस्ता छन् शास्त्रीका सुझाव
बासुदेव शास्त्री : संस्कृतमा वस वसनीय धातुमा स्टोन प्रत्यय लगाएर वास्तुशास्त्र बन्छ । मानिसको स्वभाव र आवासीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ज्ञानलाई वास्तु भनिन्छ । वास्तु विशाल शास्त्र हो । वास्तु शास्त्रभित्र ललितकला, चित्रकला, काष्ठकला, ताम्रकला, धातुकला लगायत १६ कलाहरु पर्छन् ।
घर बनाउनुअघि वास्तु नक्सा हेरेर बनायो भने त्यो घरमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुन्छ । घरको जग हाल्दा नै पाँचवटा कलश गाडेर, धातुको कछुवा राखेर, पञ्चकलशको पूजा गरेर, पञ्चशिला राखेर शिलान्यासलाई विधिवत् वास्तुशास्त्रअनुसार अगाडि बढायो भने त्यसको सकारात्मक प्रभावले जीवनमा आनन्द, सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्ति हुन्छ । वास्तु मिलाएर बनाएको घरमा शुभफल पाइन्छ ।
लेखक डा. शास्त्री बास्तुविद र ज्योतिष हुनुहुन्छ । नेपालमा होम्सबाट
निषेधाज्ञाको अवधिमा सरकारले यी १५ काम गरोस् : डा. पाण्डे
तीज र कुशे औंशीले संक्रमण बढाउन सक्छ : डा. पाण्डे